Art | J-Myanmar
ArtLife StyleLocal News
ကိုယ်​လုံး​တီး​အလှ​ကို ခံစား​ဖို့ ယဉ်ကျေး​မှု​ရှော့ခ်​တစ်​ခု​တည်း ရှိ​နေ​တာ​လား
phyo, Sep 8, 2014
လူ့​ခန္ဓာ​ကိုယ်​ရဲ့ မိ​မွေး​တိုင်း​ဖ​မွေး​တိုင်း ကိုယ်​လုံး​တီး​အလှ​ကို အနု​ပညာ​မျက်လုံး​နဲ့ ကြည့်​နေ​တဲ့ ယဉ်ကျေး​မှု​ဟာ မြန်မာ​ပြည်​မှာ​တော့ ယဉ်ကျေး​မှု​တံတိုင်း​ရဲ့ စည်း​အပြင်​ဖက်​မှာ​ပဲ ရှိ​နေ​ပါ​သေး​တယ်။ Nude Art ကို ခံစား​ဖို့၊ လက်ခံ​ဖို့ စော​နေ​တာ​ဟာ ယဉ်ကျေး​မှု​ပိုင်း​မှာ​တင် ရှော့ခ်​ရ​နေ​တာ​မဟုတ်​ဘဲ အခြား​သော ကဏ္ဍ​အားလုံး​မှာ ရှော့ခ်​ရှိ​နေ​ပြီ​လား။ နိုင်ငံ​တကာ​အတွေ့​အကြုံ​တွေ​နဲ့ မြန်​မာ့​လူ​မှု​ဘဝ၊ အမြင်​တွေ တိုးတက်​ပြောင်းလဲ​ဖို့ ကြိုးစား​နေ​တဲ့ အကယ်​ဒ​မီ ဆွေ​ဇင်​ထိုက်​ကတော့ နိုင်ငံ​ရေး၊ စီးပွား​ရေး၊ လူ​မှု​ရေး​ကဏ္ဍ​တွေ​မှာ​လည်း မြန်မာ​ပြည်​သူ​တွေ ရှော့ခ်​ရ​နေ​တာ​ကြောင့် အခု​လို ယဉ်ကျေး​မှု​ရှော့ခ်​ကို​လည်း လက်မ​ခံ​နိုင်​ကြ​သေး​တာ​ပါ​လို့ ရှင်း​ပြ​ပါ​တယ်။ အတွေး​အခေါ်​တွေ ထိန်း​ချုပ်​ခံ​ခဲ့​ရ​လို့ Nude Art ကို လက်ခံ​ဖို့​လည်း စော​နေ​တာ​ဖြစ်​မှာ​ပါ​လို့ သူ​က ဆို​ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် လူ​တိုင်း​က ရွေးချယ်​ခွင့်​ရှိ​တာ​ကြောင့် လူ​မှု​ကွန်ရက်​တွေ​မှာ​ခေတ်​စား​လာ​နေ​တဲ့ …
အင်​ဂျင်​နီ​ယာ မ​လုပ်​တဲ့ ပန်းချီ​ဆရာ
ထိုင်း​နိုင်ငံ ဘန်​ကောက်​က ABAC လို့​လူ​သိ​များ​တဲ့ တက္ကသိုလ်​က​နေ ကွန်ပျူတာ​အင်​ဂျင်​နီ​ယာ​နဲ့ ဘွဲ့​ရ​ခဲ့​တဲ့​သူ​တစ်​ယောက်​ဟာ အင်​ဂျင်​နီ​ယာ​အလုပ်​ကို စွန့်​လွှတ်​ပြီး အခု​တော့ Paper Cutting Artist အဖြစ် အသက်မွေး​ဝမ်း​ကျောင်း​နေ​ပါ​တယ်။ စက္ကူ​တွေ​ကို​ဖြတ်​ညှပ်​ကပ်​ပြီး လက်​နဲ့​လုပ်​တဲ့ အနု​ပညာ​ပစ္စည်း​တွေ​ကို ဖန်တီး​တဲ့ ထွေး​အောင်​လွင်​ဟာ အခု​တော့ ပထမ​ဆုံး တစ်​ကိုယ်တော်​ပြ​ပွဲ​ကို စက်တင်ဘာ ၆​ရက်​နေ့​မှာ ပြသ​နေ​ပါ​ပြီ။ ပန်းချီ​ဆေး​မ​ပါ​ဘဲ စက္ကူ​တွေ​ကို ဖြတ်​ညှပ်​ကပ်​ပြီး ပုံဖော်​တဲ့ ရှား​ရှားပါး​ပါး အနု​ပညာ​ရှင်​တစ်​ယောက် ပေါ်လာ​ပါ​ပြီ။ ကောက်​ကြောင်း​တွေ၊ လူ​မျက်​နှာပေါ်​က အရေး​အကြောင်း​တွေ​နဲ့ ဆံပင်​တွေ​အထိ ဆေးလုံး​ဝ မ​သုံး​ဘဲ စက္ကူ​ကို​အမျှင်​လေး​တွေ​အထိ​ဖြတ်​ပြီး ကပ်ထား​တဲ့ သူ့​ရဲ့​အနု​ပညာ​ဟာ အံ့​မ​ခန်း​ပါ​ပဲ။ ပန်းချီ​ပညာ​ကို ဆရာ ဝင်း​ဖေ​မြင့်​ဆီ​မှာ သင်​ယူခဲ့​တဲ့ ထွေး​အောင်​လွင်​တစ်​ယောက် ပုံ​ကြမ်း​အခံ​ဆွဲ​ရ​တဲ့​အကြောင်း ရှင်း​ပြ​ပါ​တယ်။ …
Filmmakers – Arga, Thar ko, Shine Linn Cameras – 5D mark 3, 7D, 70D, 600D, Gopro Hero3, Samsung NX1000 Presented by Shutter Production
IDIOTS တို့​ရဲ့ Tattoo
Q – အဖွဲ့​နာမည်​ကို တက်​တူး​ထိုး​ဖို့ ဘယ်​လို​စိတ်ကူး​ရ​သွား​လဲ?? Ko Tut – အဖွဲ့​ရဲ့ နာမည်​က ကျွန်တော်​တို့​အတွက် အရေးကြီး​တယ်​လေ။ Q – တက်​တူး​ထိုး​စဉ်​က အမှတ်တရ​လေး​တွေ ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​ဦး?? Ko Tut – အရမ်း​နာ​တယ်။ အမြဲ​ကြုံ​ရ​တဲ့ အမှတ်တရ​က တက်​တူး​ထိုး​တိုင်း နာ​တာ​ပဲ။ Q – ကို​တွတ်​ပီ ထိုး​ထား​တဲ့ တက်​တူး​တွေ​နဲ့ ပက်​သက်​ပြီး ဘယ်​တုန်း​က ထိုး​ခဲ့​တယ်၊ ဘယ်​သူ့​ဆီ​မှာ ထိုး​ခဲ့​တယ်၊ ဘာ​အကြောင်း​ကြောင့် ထိုး​ခဲ့​တယ်​ဆို​တာ​လေး​ကို ပြော​ပြ​ပါ​ဦး?? Ko Tut – IDIOTS ကို​တော့ တစ်​ဖွဲ့​လုံး ကို​ခေါင်း​ကြီး နဲ့ ထိုး​တာ​ပါ။ ပြီး​တော့ ကို​တွတ်​ပီ၊ ကို​ရဲကျော်၊ …
မျော​လွင့်​ရှိုက်​သံ ( Sob of Wanderer)
phyo, Jul 31, 2014
ဂျပန်​ရောက် လူ​ငယ်​ဒါ​ရိုက်​တာ အောင်​လင်း​နိုင်​ရဲ့ Short Film လေး​ပါ။ Starring Thar Chaw, Yi Mon, Shwe Ya Tu, Phyo Paing ဒီ​ဇာတ်​လမ်း​တို​လေး​ကို ဇူလိုင် ၁​၉ အာဇာနည်​နေ့​မှာ​စရိုက်​ပြီး ဒီ​တ​ပတ် တနင်္လာနေ့ မှာ​ရိုက်​ကူး​ပြီးစီး​ပါ​တယ်။ ရိုက်​ကူး​ရက် ၄​ရက် နဲ့​တည်း​ဖြတ်​တရက် ကြာမြင့်​ပါ​တယ်။ ရှူ​တင်​အိမ်​အဖြစ် ရိုက်​ကူး​ခွင့်​ပေး​ခဲ့​တဲ့ MA Nge LayMoe Moe Khine နဲ့ သရုပ်ဆောင်​ပေး​ခဲ့​တဲ့ လူ​တွေ ပါဝင်​ကူညီ​တဲ့​လူ​တွေ ဇာတ်​လမ်းမ​ပြီး​ခင်​က​တဲ​က အားပေး​နေ​ကြ​တဲ့ ချစ်​သူငယ်ချင်း​တွေ အားလုံး ကို​ကျေးဇူးတင်​ပါ​တယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော် ပြည်​ပ​မှာ အနု​ပညာ​အလုပ်​တွေ​လုပ်တိုင်း ဘေး​က​နေ မ​ခို​မ​ကပ် စေတနာ​အပြည့် …
ကမ္ဘာ့ လေ​ဆိပ်​များ ကို​ငုံ့​ကြည့်​ခြင်း
phyo, Jul 25, 2014
နေ့​တ​ဓူ၀ လူ​သန်း​ပေါင်း​များ​စွာ​ဖြတ်​သန်း​သွား​လာ​နေ​သော ကမ္ဘာ့ လေ​ဆိပ်​များ ကို​ကောင်းကင်​မှ​ရှု​မြင်​ကြည့်​ခြင်း။ New Zealand, Wellington International Airport Spain,Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport England, London Heathrow Airport